Del.icio.us Plug-in loogu talagalay Firefox | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 14, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa maxay calaamadeynta bulshada? Hadaad jawaabta taqaan… u gudub sadarka xiga. Haddii aadan sameyn, waa hab fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala inay ku keydsadaan oo ay wadaagaan xiriiriyeyaal calaamadeysan midba midka kale. Del.icio.us waa adeeg fiican oo kuu oggolaanaya inaad wadaagto oo aad 'calaamadeyso' xiriiriyeyaasha. Taabashada xiriiriyeyaashaada waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud uhesho xiriiriyeyaasha aad raadineyso adoo adeegsanaya interface-ka Del.icio.us.
Ma ihi taageere weyn oo ka mid ah Del.icio.us websaydhka, laakiin waxaan ahay taageere dhammaan waxyaabahooda dheeriga ah. Waxaad arki doontaa widget WordPress ah oo loogu talagalay Del.icio.us oo lagu rakibo boggeyga weyn (wuxuu ka yimid Automattic iyada oo la adeegsanayo qalabka widget-yada ee dhinaca). Sidoo kale waxaad arki doontaa inay isku dhafan tahay quudintayda iyadoo la isticmaalayo Iskuxiraha Feeburner's Link Splicer.
Adeegsiga aan ugu jeclahay Del.icio.us, in kastoo, uu yahay Firefox Plugin. Ogaysiiska sawirka hoose, waxaan kudaray batoon “Tag” bar cinwaankayga. Markaad gujiso badhankaas, waxay soo baxdaa foom fiican oo aad ka buuxin karto calaamadeynta iyo keydinta URL-ka maktabadda Del.icio.us.
Hal muuqaal oo yar oo qabow oo laga yaabo inaadan ka warqabin: Haddii aad calaamadeyso xoogaa qoraal ah oo ku yaal bogga ka dibna riix "Tag", wuxuu si otomaatig ah ugu dhejinayaa qoraalka la iftiimiyay ee ku jira qaybta Xusuusin! Tilmaamo yar oo fiican iyo waqtigiisa! Waa kan shaashadda hoose: